Raharaha Lavaraty –Tafaverina ny omby 83 : « Tsy maintsy azo ireo dahalo nandatsa-drà ireo miaramila sy sivily », hoy ny Jly Rakotonirina Richard – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 12:34
"Tsy maintsy fongorina ny asan-dahalo any amin'ny distrikan'i Midongy", hoy ny Jly Rakotonirina Richard.
Accueil/Songadim-baovao/Raharaha Lavaraty –Tafaverina ny omby 83 : « Tsy maintsy azo ireo dahalo nandatsa-drà ireo miaramila sy sivily », hoy ny Jly Rakotonirina Richard
Manoloana ireo voina lehibe vokatry ny asan-dahalo tao amin’ny distrikan’i Midongy Atsimo, ny alahady lasa teo. Hentitra ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, nanome baiko, ny tsy maintsy ahazoana ireo dahalo nandatsa-dra ireo miaramila sy sivily. Efa fantatra ny momba azy ireo ka tsy maintsy atao hazalambo…
Rado Harivelo 26 mai 2021
Ireo miaramila lavon’ny dahalo nomem-boninahitra.
« Manana adidy lehibe isika ny Tafika Malagasy, hamongotra hatramin’ny farany ny asan-dahalo, aty amin’ny Faritra Atsimo Atsinanana. Io ianao Atoa Governora, ny minisitra mpiahy ny Faritra Atsimo Atsinanana, miaraka amiko, izay nalefan’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta nandeha aty, hampitraka ireo mana-manjo, ary hitondra baiko hentitra dia hentitra avy amin’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, tomponandraikitra voalohany amin’ny fitandroana ny filaminana, araka ny voafaritry ny lalàmpanorenana eto Madagasikara », hoy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard, omaly alina, tao an-tampon-tanànan’i Farafangana. Ny baiko omeko anareo dia tsotra, hoy izy, tsy maintsy azo ireo olona nadatsa-dra an’ny Adj sefo Celin sy ny Kaporaly, izay niaraka taminy. Tsy maintsy azontsika ireo, na any Iakora na any Vonindrozo, na any Befotaka, izay toerana misy aza. Tsy maintsy tratrantsika ireo, hoy izy hentitra. Nasongadin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena hatrany, fa efa fantatra ny momba ireo dahalo ireo sy ny toerana mety halehany. Noho izany, tsy maintsy atao hazalambo ireo dahalo nahavanon-doza. Tsy ireo fotsiny, fa ireo olon-dratsy aty amin’ny Faritra ity, tsy maintsy fongorinareo, izay baiko avy amin’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, raha ny fanantitranterany. Ao anatin’ny fotoana lavalava no anatanterahana izay, ary tsy hijerena tavan’olona io. Tsy niolaka izy nanambara fa rehefa ratsy dia ratsy, ka tsy maintsy fongorina.
Omby 83 efa tafaverina…
“Tsy maintsy fongorina ny asan-dahalo any amin’ny distrikan’i Midongy”, hoy ny Jly Rakotonirina Richard.
Rehefa vita ny Faritra Midongy Atsimo, tsy maintsy irosoana ny famotehana ireo kizo rehetra. Nirary soa ireo Foloalindahy eo am-panatanterahana ny fanenjehana ireo dahalo, ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard. Fantatra fa nisy ny fanomezam-boninahitra ireo miaramila lavon’ny dahalo sy fampitrakana ireo fianakaviana niharam-boina nataon’ny Fitondram-panjakana, omaly hariva. Raha ny angom-baovao avy amin’ny solombavambahoakan’i Midongy Atsimo, Retsanga Brillant de l’Or omaly, fa « efa nahatratra 83 ireo omby latsaka teo amin’ireo dahalo, izay nizara roa ny lalany ». Efa misy ny fifandonana amin’ireo dahalo, amin’ireo Hery vonjy taitra manao ny asa fanenjehana ireo olon-dratsy. Tiana ny mampahatsiahy, fa sivily 17 ary miaramila roa no lavon’ireo dahalo, raha omby 500 kosa, no voaroba tamin’ity raharaha niseho tany amin’ny distrikan’i Midongy Atsimo ity.
KIANJAN’NY BAREA MAHAMASINA: Volan’ny Fitondram-panjakana madidio no nanorenana azy
Zandarimaria – Indonezia : Haverina ny fiofanana ao amin’ny « Ecole de guerre » any Djakarta
MINISITERAN’NY MPONINA : Tomponandraikitra teo aloha miisa fito naiditra am-ponja vonjimaika